Sishalis oo min 20 sano oo xarig ah ku xakuntay burcad badeed | raascasayrmedia.com
← Shabaab oo madaafiic qasaare geysatay ku weeraray Madaxtooyada
Shabaab oo bilaabay la tashiga raggii ka qeyb qaatay Dagaalkii 77 →
Sishalis oo min 20 sano oo xarig ah ku xakuntay burcad badeed
Maxkamad sare oo kutaala Jasiirada Sishalis ayaa xukun min 20 sano ah waxaa ay ku riday 10 burcad badeed Soomaali ah oo qeyb ka ahaa 31 qof oo burcad badeed Soomaali ah oo horay ugu xirnaa xabsi kuyaala Jasiiradaasi.
Waxaa la sheegay in 10-ka burcad badeeda Soomaalida ee Maxkamadaani ay xakuntay loo heystay dambi ah weerar ay ku qaadeen maraakiib shisheeye oo ku safrayay biyaha Soomaaliya iyo badweynta kale ee India.
“Xakunkaani waxa uu fariin gaar ah u dirayaan burcad badeeda Soomaalida, burcad badeedu waxa ay noqdeen kuwa halis ah, maalmahaan falalkoodu waa ay ka dareen waxaana qatar iyo argagixiso ay ku yihiin gobolka iyo dunida inteeda kale” ayuu yiri wasiirka arimaha gudaha, deegaanka iyo gaadiidka ee Jasiirada Sishalis Joel Morgan mar uu qadka taleefanka ugu waramayay wakaalada Wararka ee Reuters.
Horaantii bishii la soo dhaafay ayaa dowladda KMG Soomaaliya iyo Jasiirada Sishalis waxaa ay kala saxiixdeen heshiis lagu maxkamadeynayo kooxaha burcad badeeda Soomaalida kadibna sib loogu sii dirayo Soomaaliya.
Wasiirka arimaha gudaha, deegaanka iyo gaadiidka ee Jasiirada Sishalis Joel Morgan ayaa sheegay in dowladda Sishalis haatan aysan u qorsheysneyn in burcad badeeda Soomaalida ay u soo duuliso dalka Soomaaliya ilaa inta dowladda KMG ay ka diyaariso xabsiyadii loogu talagalay.